कहिले खुल्दै छ त अमेरिकी डीभीको आवेदन ? - Deshko News Deshko News कहिले खुल्दै छ त अमेरिकी डीभीको आवेदन ? - Deshko News
कहिले खुल्दै छ त अमेरिकी डीभीको आवेदन ?
अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डि.भी.) कार्यक्रम २०२० का लागि असोज १७ देखि आवेदन खुल्ने भएको छ । आवेदन दर्ता अवधि नेपाली समयअनुसार राति ९ः४५ बजेबाट सुरु हुने गरी खुल्नेछ र कात्तिक २० मा राति १०ः४५ बजे बन्द हुनेछ ।
आवेदन दर्ता गर्दा पति/पत्‍नी र आवेदनको समयमा २१ वर्ष नपुगेका सबै अविवाहित सन्तानलाई सूचिकृत गर्नु अनिवार्य गरिएको छ । तर, २०२० को डाइभर्सिटी भिसा कार्यक्रममा एक नयाँ नीतिगत परिवर्तन गरिएको छ, जसअनुसार मुख्य आवेदकले अयोग्य पति/पत्‍नी वा सन्तानको विवरण समावेश गरी पेश गरेको आवेदन अयोग्य ठहरिने दूताबासले जनाएको छ ।